Kedu otu esi edere SEO akwukwo obi ebere?
Mgbe ị na-emewanye ebe ị na-edebe ihe ọmụma n'ịntanetị, ị ga-achọ ijide n'aka na ị nwetala usoro niile dị mkpa iji kpuchie ya nke ọma na SEO-friendly content. Ide ihe dị mma dị mfe. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị rụọ ọtụtụ ọrụ siri ike iji jide n'aka na ịchọta ọdịnaya gị site na engines ọchụchọ. Iji mee ka ọdịnaya gị dị mma ma hụ maka bọtịnụ ọchụchọ, ị ga-agbaso ụkpụrụ ụfọdụ nke njikarịcha ọdịnaya. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-ewe oge iji mepụta ọdịnaya nke SEO-enyi na enyi maka mkpokọta. Otú ọ dị, site n'iji ezi uche mee ihe maka ọrụ a, ị ga-enwe ike ịmepụta SEO onwe gị - vita lipotropic benefits. N'isiokwu a, m ga-anwa ime ka obi abụọ gị nwere ghara ịchọta ma nye gị usoro ederede dị mma.
Atụmatụ iji dee ọdịnaya ọdịnaya SEO
Tupu anyị amalite ikwu okwu banyere SEO ọdịnaya dị mkpa, m ga-achọ ikwu ụfọdụ okwu maka izugbe SEO ka ị hapụ ị ghọtara ebumnuche nke ịmepụta nka na-arụ ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke njikarịcha search engine bụ iji jide n'aka na ebe ị nọ na TOP nke Google SERP. Bots ọchụchọ ga-aghọta ihe ọdịnaya gị dị na ma gosi ya na ajụjụ njirimara dị mkpa.
Iji meziwanye njirimara search engine gị, ịkwesịrị ịgbaso usoro ndị dị mkpa:
na-enye ndị ahịa gị ọrụ kasị mma;
melite ikike ngalaba gị;
mee ka azụmahịa gị mara aha.
E nwere ụdị abụọ nke search engine njikarịcha azum ị nwere ike imewe iji ebuli gị na saịtị dị ka search engine ụkpụrụ.
Ị nwere ike ime SEO gị n'ụlọ ma ọ bụ na-achọ ya. SEO ụlọ na-akwụ ụgwọ ma na-agụnye ndị maara ebe nrụọrụ weebụ nke ọma. Otú ọ dị, iji meziwanye ebe nrụọrụ weebụ gị n'onwe gị, ị kwesịrị ịma ihe niile dị mkpa kachasị mma na usoro dijitalụ. Usoro njikarịcha n'ime ụlọ nwere ike iwe oge ma ọ dị mwute na enweghị mkpụrụ. Ọ bụ ndị ọkachamara a mara amara na mpaghara a na-eduzi SEO. Ha maara akụkụ niile kachasị mma ma nwee ike inye gị ihe kachasị mma ka ha mara ihe engines na-achọ site na saịtị gị. Site n'iso ndị ọkachamara SEO ndị ọzọ na-emekọrịta ihe, ị ga-enwe ike ị nweta nsonaazụ ọma n'ime ọnwa 3-6.
Taa, m ga-anwa ịkụziri gị otu esi emepụta àgwà na SEO-friendly content site na onwe gị ma zọpụta ego gị na SEO copywriting ọrụ. Ihe omimi kachasị mma agaghị adị mfe ma ọ bụ na-ewe oge, ọ bụrụhaala na ị ghọtara otú njikwa kachasị mma nwere ike isi rụọ ọrụ gị. Nke a bụ otu e si dee ọdịnaya SEO-omume enyi na bọtịnụ ọchụchọ na ndị ahịa gị ga-enwe obi ụtọ.
Nnyocha nchọpụta bụ akụkụ kachasị mkpa nke mgbasa ozi SEO na-emeri na ala akara maka SEO enyi na enyi. Ihe dị mkpa ma zubere isiokwu iji chọpụta ihe ị ga-eme. Iji mee nchọpụta nchịkọta ziri ezi, ọ dị gị mkpa ichebara ihe ọchụchọ ịchọrọ ndị ahịa gị nwere ike iji chọta ibe weebụ gị. I kwesiri ịzụlite nkwekọrịta nke ịmara ihe ndị ọrụ na-atụ anya site na saịtị gị. Iji bido na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ, ịkwesịrị ịhọrọ ogologo oge ma ghara ịchọta okwu ọchụchọ asọmpi. Iji mee ka usoro nyocha nke ihe dị mfe, ị nwere ike imepụta ụdị ngwá ọrụ ndị a dị ka Semalt Auto SEO, Ngwaọrụ ma ọ bụ Google Planner. Ndị a ngwaọrụ ga-enyere gị aka ọ bụghị nanị na-eme ka elu ndepụta nke ndị kasị mkpa igodo ahịrịokwu kamakwa na-enye gị nghọta site na ihe Keywords gị ndị asọmpi rank.
Ọkachamara dị iche iche
N'ezie, ọ dịghị ihe kpatara ọrụ ọhụụ ọhụụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo aka ịpụta. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọta echiche site na isi akwụkwọ ọzọ, ịkwesịrị ịnye ọdịiche pụrụ iche nke ga-eme ka isiokwu ahụ dịkwuo mkpa. Site na nchịkọta-ịkọgharị ọdịnaya, ị na-enwe ihe ize ndụ inweta nkwụsị sitere na Google ma nwee ike ịhapụ ọnọdụ ogo gị. Ọzọkwa, ndị ọrụ nke hụrụ ọdịnaya a na-abụghị nke mbụ na isi mmalite ndị ọzọ, agaghị ewere mpaghara gị dị ka ihe dị mkpa na nke a pụrụ ịtụkwasị obi. Jide n'aka na ọdịnaya gị dị iche, dị mkpa ma na-aga n'ihu iji jikọta ndị ọrụ ma gbanwee ha na ndị ahịa gị. Ị nwere ike ịlele njirimara gị dị iche iche site na ọtụtụ ngwaọrụ akpaaka dịka Copyscape ma ọ bụ Plagiarism Checker.
Nkọwa aha na nhazi
Nchịkọta isiokwu gị bụ ihe mbụ ndị ọrụ nwere ike ịhụ mgbe ị na-achọ. Ọ na-arụ ọrụ dịka nhụchalụ nke ọdịnaya gị. Aha gị kwesiri ido aka, inweta na SEO-enyi na enyi. Jide n'aka na ị na-agụnye mkpụrụedemede dị elu na nke dị elu na utu aha gị. Jiri okwu ike ma zere redundancy iji mepụta aha doro anya. Ịkwesịrị ịgụnye ihe kachasị mkpa banyere azụmahịa gị na mkpụrụedemede 60. Ọ bụ ya mere m ji nye gị ndụmọdụ ka ị tụlee ihe dị iche iche dịka i nwere ike.
Ọzọkwa, mara ihe nyocha SEO ma jide n'aka na ị mejuputara H1 mkpado na nchịkọta niile n'ime ọdịnaya. Ọ bụkwa mkpebi amamihe dị na ya iji wepụta paragraf ụfọdụ site na ndepụta okwu iji mee ka ọdịnaya gị dị mfe ịgụ na pịgharịa. Ịkwesịrị iji H2 maka mkpado gị niile. Jide n'aka na ị gụnyere isiokwu dị mkpa na utu aha na ndepụta okwu iji kwe ka bọtịnụ ọchụchọ chọta ngwa ngwa gị ọdịnaya.
Iji mee ka ị nweta ọdịnaya ọdịnaya SEO, ị ga-enwe URL ndị kwesịrị ekwesị. Dochie URL niile na-ezighi ezi na ndị a na-apụghị ịgụta ede site kpọmkwem na kachasị mma. URL ndị enweghị uche ọ bụla anaghị aba uru ọ bụla maka ndị ọrụ ma ọ bụ bọtịnụ Google. Otu SEO-enyi na enyi URL bụ otu nke nwere isiokwu na ya. Site n'inyochacha URL gị, ị na-azụlite ohere ị ga-ejide site na search crawlers.
Nkọwa nkọwa bụ ederede nke kọwara ebe nrụọrụ weebụ gị ma gosipụta n'okpuru ya saịtị gị URL na ọchụchọ. Ọ bụ ihe mbụ ndị ọrụ nwere ike ịgụ tupu ha abanye na ebe nrụọrụ weebụ ọ bụla. Nkọwa gị atọ kwesịrị itinye aka ma dị mkpa na ọdịnaya saịtị gị iji mee ka ndị ọrụ soro saịtị gị maka ama ndị ọzọ. Nchịkọta atọ-nkọwa nwere ike inyere gị aka ịmepụta ntinye ọnụ na ọbụna meziwanye ebe nrụọrụ weebụ.
Njikọ dị n'ime na nke mpụga
Njikọ dị n'ime saịtị na-egosi na saịtị gị bụ ihe a ma ama n'ọhịa. Site n'inwe njikọ njikọta, ị na-emepụta usoro ezi uche site na otu post na ọzọ. Ịtụgharị uche ga-eme ka saịtị gị dịkwuo mkpa site na ịnyekwu uru maka ụfọdụ isiokwu ụfọdụ. Ọzọkwa, ọ ga - enyere ndị bọọgụ aka ịghọta isiokwu gị.
Njikọ ndị dị n'èzí na okwu ha na-egosi ikike mpaghara gị ma melite mmata gị. Njikọ ndị dị n'èzí na-egosi maka engines ọchụchọ na ọdịnaya gị dị mma ka ọ na-ekere site na ndị ọrụ na ndị ọzọ na-esi na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụ ihe ezi uche dị na itinye njikọ gị na ngalaba ndị a ma ama na ogologo oge n'ihi na njikọ ndị a nwere ntụkwasị obi.